France ichichera mvura yeasidhi kubva kuCanary Islands kuputika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » France ichichera mvura yeasidhi kubva kuCanary Islands kuputika
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Health News • nhau • vanhu • Resorts • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kuputika kwegomo rinoputika riri muCumbre Vieja National Park nemusi weSvondo kwakamanikidza vagari zviuru zvitanhatu pachitsuwa cheLa Palma kusiya dzimba dzavo. Zvinoenderana neyakavandudzwa kubva kuCopernicus Emergency Management Service nemusi weChina, zvivakwa mazana matatu nemazana matatu zvakaparadzwa, nekuyerera kwemabota kwakafukidza pamusoro pe6,000 mahekita.
Minda yesulphur dioxide yakagadzirirwa kutsvaira muFrance nemugungwa reMediterranean vhiki ino.
Iko kwakanyanyisa kusungwa kwemwaka wesurufa dioxide makore anosvika pakukwirira kwemamirioni chiuru kusvika zviuru zvitatu.
Canary Islands Volcanology Institute yakafungidzira kuti kuputika kweCumbre Vieja volcano iyo yakagadzira iyo sulfur dioxide inogona kugara "pakati pemazuva makumi maviri nemana kusvika makumi masere nemana nemana".
Keraunos, iyo chamupupuri yeFrance uye kuchema kukuru kwekutinhira kwemheni, nhasi vakagovana mufananidzo kubva kuEU chirongwa cheCopernicus chinoratidza kuti mapurumu esulphur dioxide, ayo akonzerwa nekuchangobva kuitika kweSpanish Canary Islands kuputika kwemakomo, akagadzirirwa kutsvaira France nemugungwa reMediterranean vhiki ino. Iko kwakanyanyisa kusungwa kwemakore kunosvika pakukwirira kwemamirioni chiuru kusvika zviuru zvitatu.
Furanzi uye nzvimbo dzeMediterranean dzinofungidzirwa kuti dzichanzwa migumisiro yekuputika, sezvo makore akazadzwa nesarufa dioxide achikwira muEurope, zvichiita kuti mvura inyore zvishoma.
The Canary Islands Volcanology Institute (Involcan) yakafungidzira kuti kuputika kweCumbre Vieja volcano iyo yakagadzira iyo sulfur dioxide inogona kugara "pakati pemazuva makumi maviri nemana kusvika makumi masere nemana nemana".
Sekureva kwenyanzvi, sarufa inopindirana nemhute yemvura irimo mudenga uye inopa sulfuric acid, iyo inowanzo gadzira acid mvura. Nekuda kweizvozvo, kunaya kwemvura mumazuva anouya kuchanyanya kuva acidic kupfuura zvakajairwa munzvimbo dzakakanganiswa.
Sulphur dioxide inogona kukanganisa nharaunda uye hutano hwevanhu zvakafanana, zvichikonzera kutsamwa kumapapu nemaziso. Munhu, zvakadaro, akataura kuti chiitiko ichi hachizosimbe zvakanyanya nekuti ma particles akapararira zvakanaka.
The kuputika kwegomo iri muCumbre Vieja National Park nemusi weSvondo yakamanikidza vagari zviuru zvitanhatu pachitsuwa cheLa Palma kusiya dzimba dzavo. Zvinoenderana neyakavandudzwa kubva kuCopernicus Emergency Management Service nemusi weChina, zvivakwa mazana matatu nemazana matatu zvakaparadzwa, nekuyerera kwemabota kwakafukidza pamusoro pe6,000 mahekita.
Chitsva chitsva chekuputika chakabuda husiku hweMuvhuro pa Spanish Canary Chitsuwa mushure mekudengenyeka kwenyika kwe4.1. Vadzimi vemoto vanga vachishanda kutamisa kuyerera kwemakomo kubva kure negungwa sezvo kubatana pakati pemvura yegungwa nemvura yegungwa kunogona kugadzira utsi hune chepfu.
Chronic Low Back Pain: Chekutanga Nyowani Virtual Reality...
New UNWTO Election Prediction Yakaburitswa neWTN
Canada Kupa Nyowani Kuzviparadzanisa Saiti kubva kuCOVID-19
Smart Muvhuro kuIMEX America: Kusanganazve kweVakare Shamwari
New Hei! Kafe Inobudirira muIndia
Murume anoedza kutanga moto pachitima cheJapan chinomhanya kwazvo
Beyond Zoom: IMEX America yakaita misangano yega yega ...
USTOA Mukuru wekutanga Malta-Israel Joint Promotion mu...
France inozivisa seti nyowani yeCOVID-19 zvirambidzo
Minister Vanovimbisa Kuwedzera Kwakasimba Mentorship uye...